Miisaaniyad 26 bilyan oo koron oo dawladdu soo bandhigtay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka maaliyadda Sweden, Magdalena Andersson (S) oo soo bandhigeeysa miisaaniyadda dayrta 2019. sawir: Claudio Bresciani/TT
Miisaaniyad 26 bilyan oo koron oo dawladdu soo bandhigtay
La daabacay onsdag 18 september 2019 kl 12.17
Dawladda ayaa qoondeeysay maal gelin miisaaniyadda sannadka 2020 26 bilyan oo koron, middaasina oo badankeed lau maal gelin doono dhimista canshuurta dakhliga, sidoo kale nidaamka hab nolol wanaagga bulshada oo lagu korhdin doono hal bilyan oo koron, waana miisaaniyad ballaaran oo saameeynaysa dhincayo ballaaran, sida ay aaminsan tahay wasiirka maaliyaddu.
Miisaaniyadda dawladda ee 2020 oo arbacada maanta 18-ka sebteember la soo bandhigay ayaa ah miisaaniyaddii ugu horreeysay oo ay dawladdu kula heshiisay xisbiyada Centern (C) iyo Liberalerna (L).
- Waa miisaaniyad taabaneeysa dhinacyo ballaaran oo kala duwan oo wax looga qabaneyo howlaha dalka hor yaala, sida ay sheegtay wasiirka maaliyadda Magdalena Andersson (S).
Miisaaniyaddan ayaa isugu jirta maal gelin dawladda oo gaarsiisan 26 bilyan iyo sidoo kale maal gelinnadii 2020 ee horey loo go’aansadey.
Xisbiyada xulufada ku ah dawladda iyo labada xisbi ee C iyo L ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey soo bandhigayey habka ey damacsan yihiin iney u kharash gareeyaan, hase yeeshee weli dhiman yihiin maal gelinno kale oo la soo ban dhigi doono.
Maal gelin badan oo canshuur lagu dhimey
Miisaaniyad ballaaran oo gaarsiisan 11,8 bilyan oo koron waxaa loogu talo galey in lagu dhimo canshuurta dakhliga ee dadka qaata mushaarooyinka sare, howl gabka iyo dadka deggan tuulooyinka.
Madaxa miisaaniyadda ugu badan ee miisaaniyadda dayrta ayaa ah dhimista canshuurta loo yaqaanno värnskatten oo uu soo jeediyay xisbiga Liberalerna. Iyadoona ay ku kaceeyso 6,12 bilyan oo koron sannadka 2020.
Degmooyinka oo loo qoondeeyey miisaaniyad dheeri ah
In kasta oo ururka daladda shaqaalaha - LO iyo xisbiga Vänsterpartiet-ba dhaleeceeyeen miisaaniyadda dawladda ayay sheegeen inay ka mudnayd maal gelinta nidaamka hab nolol wanaagga bulshada - välfärden. Iyadoona ay dawladdu u qoondeeysay hal bilyan oo koron. Dhanka kale hoggaannada degmooyinka iyo gobollada oo leh masuuliyadda iskuullada, dar yeelka caafimaad iyo xanaannada waxaa sidoo kale lagu kabi doonaa miisaaniyad gaarsiisan shan bilyan oo koron sannadka 2020.
Misaaniyaddan shanta bilyan oo lagu xusay miisaaniyaddii sannadkan oo ey ku guuleeysteen xisbiyada Moderaterna iyo Kristdemokraterna, isla markaana uu baarlamanku u codeeyey bishii diseembar 2018 ayaan iminka lagu carabaabin miisaaniyadda dheeriga ee maanta la soo ban dhigi doono.
Degmooyinka oo ay dhici karto in miisaaniyad dheeri ah ey helaan
Miisaaniyad dheeri ah ayey sugu karaan hoggaannada degmooyinku, kolka arbacada maanta la soo bandhigo madaxyada ugu dambeeya ee miisaaniyadda daladda ee sannadka foodda innagu soo haya 2020.
Su’aasha siyaasadda la xiriirta falalka dembiyada iyo sidii looga hor tegi lahaa dhallin yarada dembiyada isku baheeysta, waxaa miisaaniyadda loogu qoondeeyey hayadaha cadaaladda miisaaniyad 0,7 bilyan ka sarreeysa intii horay loogu qoondeeyey 2020. Tusaale ahaan howlaha maxkamadaha oo loo qoondeeyey 280 malyan oo koron.
Boliiska oo loo qoondeeyey 120 malyan oo dheeri ah, iyo sidoo kale miisaaniyaddii dheeriga ahayd oo horay loogu qoondeeyey oo gaarsiisnayd 1,8 bilyan oo koron sannadka 2020.
Dhimista farqiga dabaqadaha
Su’aasha kale ee sida aadka ah loo hadal hayay ayaa ahayd kor u kaca farqiga u dhexeeya maaglooyinka waaweyn iyo kuwa yaryar. Iyadoona miisaaniyadda loo qoondeeyey qiyaastii 700 oo malyan dhimista canshuurta tuulooyinka.
Miisaaniyadda sannadka 2020 ayey ka mid yihiin maal gelin abuurista goobooyin shaqo oo dheeri ah, oo loo qoondeeyey qiyaastii 3,7. Dhimista khidmadda shaqa bixiyaha, dhaqaale shaqa bixiyuhu uu ku helo labada sannadood ee ugu horreeya kolka uu shaqaaleeyneyo dhallinyaro, dadka dalka ku cusub iyo dadka suuqa shaqada mudo dheer ka maqnaa. Maal gelinta howlaha abuurista shaqada ayey sidoo kale ka mid yihiin miisaaniyad dheeri ah oo loo qoondeeyay shaqooyinka dheeriga ah extrajobb iyo aqoon kororsiga xirfadaha suuqa shaqada.
Dhanka kale waxaa muuqada in bilahan dambe ay shaqa la’aantu kor u sii kaceeysay in ka badan saadaalintii dawladda, iyadoona degmooyin badani aaminsan yihiin in dawladdu miisaaniyad ka badan geliso sidii gacan looga siin lahaa xakameeynta shaqa la’aanta.
Mar haddii ay xaaladda kobaca dhaqaaluhu aad uga sii xumaado sida la saadaalineyo ayay dawladdu ku talo jirtaa inay miisaaniyaddeeda wax kaga badasho miisaaniyadda dhammeeys tirka ee bisha abriil 2020-ka u qoondeeysan in la soo ban dhigo, sida ay sheegtay wasiirka maaliyadda Sweden Magdalena Andersson.